Hal askari oo dhaawac kasoo garaay kadib markii bam lagula egtay Countiga Lamu – The Voice of Northeastern Kenya
Hal askari oo dhaawac kasoo garaay kadib markii bam lagula egtay Countiga Lamu
Hal askari oo katirsana ciidamada Booliska kuwa Maamulka ee AP-da ayaa lagu soo waramayaa in uu dhaawac kasoo garay kadib markii dabley la rumeysan yahay in ay katrisan yihiin Kooxda Alshabaab bam gacmeed ku soo tuuray.
Weerarkan oo sidoo kale uu ku dhawacmay sarkaal u xil saaranaa qodista dhulka oo katirsanaa laanta adega qaran ee NYS-ta ayaa waxaa uu ka dhacay wadada Usalama Road halkaas oo u dhaw meesha laga dhisayo darbiga kala qeybin doona Dalkani Kenya iyo Soomaliya.
Gudoomiyaha Countiga Lamu Joseph Kanyiri oo xaqiijiyay dhacdadani ayaa sheegay in sarkaaladan weerarka lagu qaaday abaare 9am subaxnina ee saaka oo Isniin eheyd.
Kanyiri ayaa sheegay in falkaasi loo maleynayo in ay kadambeeyan kooxda Alshabaab oo halkaasi ka gesta weeraro ay dad badan ku dhinteen waxuuna intaa kudaray in ciidamada booliska ay bilaaben baaritano ay kaga jawabayaan weerarkaasi.
Weerarka ayaa meesha u ka dhacay waxuu sidoo kale u dhawyahay xerada Kiungu oo qiyaastii 60 miitar u jirto, waxaana dadkii ku dhaawacmay loo soo qaaday Isbitalka Nairobi ee Magaalada caasimada ah.
Warar hoose oo laga helayo ciidamada Booliska ayaa sheegaya in sarkaalka dhawaciisu uu u badan yahay labada lugooda oo kasoo gaaray firdhaadka bamka halka sarkaalka kale ee katirsanaa NYS-tan uu qabo dhawacyo fudud.
Dhacdadani ayaa ku soo aaadeysa hal isbuuc kadib markii shan kamid askari oo katirsanaa ciidamada difaaca dalka ee KDF-ta kabad baaden miino dhulka loogu aasayo oo lagu doonayay in lagu qaarijiyo.
Weerarkaasi oo ka dhacay isla deeganka Kiungo ayaa lala egtay gawaarida tangiyada oo ay ciidamada isticmaalayaan kuwaas oo howgalo lagu xaqiijinayo amaanka ka waday deegankaasi 25-ki bishii July-.
Kooxaha Alshaab ayaa weeraro kala duban labadii sano ee la soo dhaafay ka geysanayay gobolka xeebta ee dalka.
← Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo laga codsaday in uu taageero hoos u dhigidda faa’iidada deymaha
Ismael Bennacer oo loo sheegay in uu u dheeli karo xulkiisa →
1 thought on “Hal askari oo dhaawac kasoo garaay kadib markii bam lagula egtay Countiga Lamu”
Hassandeeq Gedi says:
Should be close as normal because the students will exceed to burn the school properties which will results a great loss to our country